Ogaden News Agency (ONA) – Hungary oo Mamnuucaysa Muhaajiriinta Magangeliyo Doonka Ah.
Hungary oo Mamnuucaysa Muhaajiriinta Magangeliyo Doonka Ah.
Baarlamaanka dalka Hungary ayaa meel mariyay sharciyo la doonayo in lagu xakameeyo dadka soo galootiga ah ee dalkaasi magangelyada u raadsanaya.
Sharciyadan ayaa waxaana ku jira qaanuun dambi iyo xadgudub ka dhigaya dadka soo galootiga sharci darrada ah. Dowladu waxa ay sheegtay in ay u baahan tahay in ay ilaaliso amniga iyo haybta dadka dalka Hungary.
Sharcigan cusub ayaa lagu dhaliilay in uu halis gelinayo soo galootiga oo uu bartilmaameedkiisu yahay kooxaha u dhaqdhaqaaqa xuquuqda muhaajiriinta iyo kooxaha bulshada rayidka ah ee u gurmada dadla soo galootiga ah ee dalalkoodii amni darro iyo colaado uga soo qaxay.
Baarlamaanka ayaa sidoo kale meel mariyay isbeddel lagu sameeyay dastuurka dalkaasi, kaa oo mamnuucaya in deganaasho lasiiyo wax ay ku tilmaameen dadka sharci darrada ku soo galay dalkaasi. Khubarada dhanka sharciga ayaa ka digaya suurtagalnimada in sharciyadan cusub ee dalka Hungary ay lid ku noqdaan shuruucda u taala waddamada Midawga Yurub (EU) iyo qawaaniinta kale ee xaquuqul insaanka ee caalamiga ah.